भारतवर्षमा लिपिको सुरुवात
इ.पू. सातौ आठौं शताब्दीतीर नेपालमा बुद्ध जन्मनु भन्दा केही सय वर्ष अगाडि देखि नै लिपि रहेको पाइन्छ । लिपिहरूको मूल आमा चाहिँ ब्राम्ही लिपिलाई मानिन्छ । ब्राह्मण भन्ने नाम चाहिँ सन् ३००–४०० (तीन चार सय) वर्ष पछि बाट भएको र त्यस समयमा यो लिपि प्रयोग गरेको हजार वर्ष भन्दा बढी भैसके पनि पछिका मान्छेहरूले यो लिपि ब्राहमणले बनाउनु भएको हो भनी लिपिको नाम पनि ब्राहमण लिपि राखिएको पाइन्छ । आध्यात्मिक गुरु गेदुन क्षोफेलले यस लिपिलाई आजकल ब्राह्मी लिपि भन्ने पनि त्यही ब्राह्मी लिपि नै हो भन्नु भएको छ । त्यस समयमा तैर्थिकहरूले पनि यहिँ लिपि प्रयोग गर्थे । बुद्ध स्वयम हुँदा राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरा गौतम बुद्धलाई लामो समयसम्म देख्न नपाएर यस्तो लेख्नु भएको थियो :
गर्भमा बस्नु भएको देखि
मैले तपाईलाई राम्रोेसंग संरक्षण गरे ।
क्लेशको छाताले अतिनै राम्रो संग ओगटेको हुनाले
राजाको वृक्ष पनि जहाँको त्यहि नष्ट भए ।
शिष्य धर्मको अभ्यासमा लाग्नु भएर
अहिँले तपाई स्वयं बुद्ध हुनुभई
अरुलाई शान्तिले खुशी दिनु भएर
म चाहिँ दुःख कष्टलाई आश्रय लिइरहेको छु ।
कुनै समयमा तपाईको रक्षा गर्दा
अत्यन्तै सार्थक कार्य गर्नु भएर
आफन्तको पछि लाग्नु पर्छ भन्दा
त्यस समयमा तपाईले अस्वीकार गरि
त्यसबाट तपाईले उपाधि पाउनु भयो ।
अब म र आफन्त गणहरूलाई
कृपा र स्नेह पश्चात् शरणमा लिनुहोस् ।
र सक्षम बुद्धि पाउनको निम्ति
लीला प्रकट गरि दिनुहोस् ।
भनी लेखेर भिक्षु क्षर्काको हातमा पठाउनु भएर बुद्ध स्वयमले हातमा लिई पढ्नु भएको चिट्ठी यसै लिपिमा लेख्नु भएको थियो भने बुद्ध महापरिनिर्वाण भएपछि पहिलो धर्म संगीति पनि यही लिपिमा उतारिएको थियो ।इ.पू. ३०४–२३२ माराजवंशावलीको समयमा राज्य चलाउने धर्मराजा सम्राट् अशोकले स्थापनागर्नु भएको पैतीस ओटा जति स्तम्भ मध्ये दुईवटा बाहेक अरु सबै ब्राम्ही लिपिमा मात्र कुँदिएको देखिन्छ । त्यसो भए यो लिपिको वनावट कस्तो हो भन्दा गेदुन क्षोफेलको भनाई अनुसार गुप्ता लिपिको ‘क’ ‘ख’ जुन छ त्यही हो । यो लिपिको उत्पत्ति वा मुल मुहानको बारेमा भारतवर्षका मान्छे आफैले बनाएको वा अरु ठाउँबाट आएको र अरु ठाउँबाट आएकोमा पनि विचार नमिल्नेहरू धेरै भएपनि उचित चाहिँ यसको वनावट प्राय जसो अरामाको स्वर व्यंजन लिपिको आकार अनुरुप भएको हुनाले त्यहाँबाट विकास भएको मानिन्छ । उहिलेको लिपि पनि पछि आएर भारतवर्षका मान्छेहरूले लामो समयसम्म विस्मृति भएर उन्नाइसौँ शताब्दी भित्र आदितका लिपिहरू अनुसन्धान गर्नेहरूले फेरि पढ्न जानेका हुन् ।
चौथो शताब्दीको समयमा भारतवर्षमा साहित्यिक कृति र कला शिल्पहरू बृहत रुपमा फैलिए स्वरुप ब्राह्मी लिपि पनि क्रमश गुप्ताको लिपिमा परिवर्तन भए । गुप्ताको राज वंशावलीमा अगाडी पछाडी दुईवटा आदितका लिपिहरू रहे । पहिलो सन् ३२० (तीन सय बिस) मा स्थापित भएर दोस्रो चाहिँ सन् ५३५ (पाँच सय पैतीस) देखि ७३० (सात सय तीस) वर्षको बीचमा हो । सातौं शताब्दीको अन्ततिर गुप्ताको त्यही लिपि आधार मानेर नगरको लिपिमा परिवर्तन भयो । आठौं शताब्दीमा नगरको लिपिबाट रञ्जनालिपि विकास भएको मानिन्छ ।